ဆိုးသွမ်း: April 2009
7 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:30 PM
ဆောင်းရာသီကျော်သွားတော့ နွေရာသီရောက်လာပြီ။ သူငယ်ချင်းတချို့လက်စွမ်းပြထားတဲ့ နွေရာသီ မော်စကိုပါ။ ရိုက်တာကတော့ ရိုသမျှ လိုက်ရိုက်တာပဲ။ မိန်းခလေးပုံတွေချည်းတင်ရင် အပြောခံရမှာမို့...မျှတင်လိုက်ပါတယ်။ :)
ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆို ပဲပေးဖို့ အတက်ကြွဆုံး...မော်စကိုသူတွေ
Wicker Park ( Drama ကောင်းကောင်း ကြိုက်သူများအတွက် )
7 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:23 PM
“ Wicker Park ”
စာဖတ်သူအနေနဲ့ တကယ်လို့များ ဒီကားကို ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီကားဇာတ်လမ်း အမျိုးအစားကို psychological drama /romantic mystery film လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာကြောင့် ဒီလို သတ်မှတ်လိုက်တာလဲ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရအောင်....ဒီကားကို ဒါရိုက်တာ Paul McGuigan က အဓိက ဇာတ်ဆောင် ၄ ယောက်ထဲနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို လှည့်ပတ်ရိုက်ပြသွားတယ်။ ဒီ Wicker Park ရုပ်ရှင်ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ US $30,000,000 ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ စတင်ထွက်ခဲ့တာပါ။ အဓိက တိုက်ဆိုင်မှုကတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပါဝင်တဲ့ အဓိက အကျဆုံး မင်းသား နဲ့ မင်းသမီး ၂ ယောက်က July လမှာ မွေးတဲ့လူတွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Prominent photographer အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားဟာ တစ်နေ့တော့ သူ့ဆိုင်ကို စက်လာပြင်တဲ့ ခွေထဲက ၊ အိမ်ထဲမှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ရိုက်ထားတဲ့ homemade video လေးကို ကြည့်မိရင်း မင်းသမီးလေးကို မြင်မြင်ချင်း စွဲလန်းသွားမိပါတယ်။ အဲဒီနောက် မင်းသားလည်း လမ်းပေါ်က အရာဝတ္တုတွေကို ဆိုင်ထဲကနေ လှမ်းရိုက်နေတုန်း သူမြင်ခဲ့ရတဲ့ ခွေထဲက ကောင်မလေးကို ရုတ်တရတ် အပြင်မှာ တွေ့လိုက်ရတော့ လူငယ်ထုံးစံ အတိုင်း ချက်ချင်း အ၀တ်အစားတွေ ယူပြီး ပြေးထွက်သွားပြီး မင်းသမီးနဲ့ သွားစကားပြောခဲ့တယ်။
သူအဲဒီလို မထွက်ခွာ ခင်မှာ အပေါက်ဝမှာ အဲဒီဗီဒီယိုကို လာရွေးတဲ့ တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သူဝင်တိုက်ခဲ့ပေမယ့် သတိမထားမိဘဲ ရှေ့ကိုသာ စွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီမိန်းခလေး ဟာ ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက အသက်တခုပါ။ ဒါကို ဒါရိုက်တာက ရုပ်ရှင်ပြီးမှ ပြန်ပြသွားတယ်။ ကဲ အခုတော့ ကျနော်ပြောလိုက်တော့ သိကုန်ပြီ။း)
ဒီလိုနဲ့ မင်းသားနဲ့ မင်းသမီးလေးဟာ ကြိုက်နှစ်သက်သွားတယ်ပေ့ါ။ အဲဒီလို ကြိုက်နှစ်သက်သွားပြီး ပုံပြင်တွေထဲကလို မင်းသမီးလေးက ရုတ်တရတ် ဇာတ်လမ်းထဲက ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ၁ နှစ် ၊ ၂ နှစ် တိတိတောင်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားကတော့ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးကို လိုက်ရှာရင်း မလွဲမရှောင်သာ သူ့အလုပ်သူဌေးရှင်ရဲ့ ညီမကို လက်ထပ်ပါ့မယ်လို့ ကတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
၄ ပွင့်တင်မဟုတ် ၊ မင်းသား သူငယ်ချင်းနဲ့ဆို ၅ ပွင့်ဆိုင် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားတခုပါ။ အဆုံးမှာ ဘယ်သူနဲ့ပဲ ညားသွားတယ်ဆိုတာတော့ မပြောတော့ပါဘူး။
မင်းမရှိခဲ့တောင် င့ါအခန်းထဲမှာ မင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ တယုတယနဲ့ ကပ်ထားတုန်း
ဒါက ၃ ပွင့်ဆိုင်
တိတ်တိတ်လေးနဲ့ အနားကပ်လာတဲ့အခန်း ( ကြွေသွားမယ်နော် )
အဲဒီလို နမ်းပြီး မင်းထွက်သွားခဲ့တာ....
တိတ်တခိုးချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ် Alex
အခြေအနေအရ မလွဲမရှောင်သာ လက်ခံလိုက်ရတဲ့ သူဌေးညီမကိုလား
ရုတ်တရက် မပြောမဆိုဘဲ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ၂ နှစ်လုံးလုံး လိုက်စုံစမ်းပေမယ့် ဘယ်ဆီဘယ်ဝါ ရောက်နေမှန်း မသိတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကိုလား
ဆိုတာကို LCD မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါစို့လို့ ........ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မှတ်ချက်ကတော့းဒီဇာတ်လမ်းဟာ ကိုရီးယားကားတွေ လှည့်တာလောက်ကို သနားတယ်ဆိုလား..။ ကြည့်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကြော်ငြာမကောင်းရင် ကျနော့အပြစ်သာဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ဇာတ်လမ်းသည် ထင်ထားသည်ထက်
1&8 ပါ လင့်ခ်တွေသေနေတယ်ဆိုလို့ ကျနော်ချတာတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါပဲ။တခုခုတော့ မှားနေကြပြီ။း) မရရင် www.katz.cd မှာ နာမည်သာရိုက်ပြီး ရှာလို့၇ပါတယ်။
9 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:00 AM
အခုထိ တချွင်ချွင်နဲ့ ပိုင်ရှင်ကိုမျှော်နေတုန်းပဲ
တစ်စုံတစ်ယောက်မှ သစ်ရွက်အကြွေတွေကို ဖြစ်ဖြစ်
ကတ္တရာ လမ်းမတွေကို ဖြစ်ဖြစ်
“ သူတို့ သခင်မဟာ ” ဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း
တိုးတိုးလာယူကြ - သိရင်မကောင်းဘူး :P
7 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:41 PM
ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုတော်ကိုလည်း စော်ကားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အင်္ဂလိပ်သီချင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူဆိုရင် ကျွန်တော်အခု ဟန်ထွန်းရဲ့ သီချင်း နှစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်။ ဟန်ထွန်းခွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီသီချင်း ၂ ပုဒ်က အင်္ဂလိပ်ဆို ဆိုတော့ သာမန်အတိုင်းပဲ။ ဟန်ထွန်းဆိုမှ တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ ဆွဲပြီး နားထောင်ကောင်းတာ။ :) ။ တကယ်လို့ လေးဖြူ ၊ အငဲ ၊ မျိုးကြီးတို့ဆိုထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်အော်ရီဂျင်နယ် သီချင်းတွေ လိုချင်ရင်ပြောပါ။ သိမ်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေ့ါ။ :P
5 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:37 PM
HappyCloud က ကိုမိုးမောင်က သူသေသွားရင် ဖဲဝိုင်းထောင်ပေးပါတဲ့။ :D အဲဒီက ရလာတဲ့ အကောက်တွေရယ် ၊ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ပစ္စည်းတွေစုစုပေါင်းထဲက ၁၀ ပုံ ၁ ပုံကို မင်းယူ။ ကျန်တာ မင်းအစ်မကို ပေးလိုက်ဆိုပြီး မနေ့က စိတ်ဓတ်ကျစွာနဲ့ ဖွင့်ဟလာတယ်။ :) စိုင်းစိုင်းလို ဆိုရရင် “ ငါနားလည်ပါတယ်....ဒါက နင့်ရဲ့ အခြေအနေပေ့ါ ” ဖြစ်နေပြီ။ ပြည်တွင်းက အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပထွက် အလုပ်ရှာမိပါတယ်။ စီးပွားရေးပျက်ကပ်နဲ့ တိုးနေတော့ ဘာမတော့ မလုပ်ပေးနိင်ပေမယ့် ကိုယ်ချင်းတော့ စာမိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ယောက်ဖကြီးမိုးမောင်ကို နှစ်သိ့မ်ထားရတယ်။ တော်ကြာ သူက ( ကိုယ့်အစ်မ ) ပစ်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ :P အခုပြောပြချင်တာ ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က ဆရာတော် ဦးဇ၀န ( မေတ္တာရှင် - ရွှေပြည်သာ ) ရဲ့ ရေးသားတော်မူတဲ့ တရားစာအုပ်ထဲက စာလေးတခုကို ပြန်လည်ဖောက်သည် ချချင်လို့ပါ။ ဘုန်းကြီးနာမည်တော့ မရေးထားပါဘူး။ ခုနှစ်က ၁၉၉၂ ခုနှစ်တုန်းက။ လွယ်လွယ်ပဲ ပြောကြပါစို့။ တရားပွဲတခုမှာပေ့ါ.....
“ ဒကာ ၊ ဒကာမ အများစုဟာ မကောင်းကျောင်းပို့ဆိုတဲ့အတိုင်း မကောင်းတာမှ ကျောင်းပို့ကြတယ်။ ကောင်းတာကြတော့ ကျောင်းကို ပို့ဖို့ သတိမရဘူး။ လူတစ်ယောက်သေပြီဆို သေသူဝတ်ခဲ့တဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို လိုက်ကာတွေ ၊ အနေကထိုင်တွေ ချုပ်ပြီး ကျောင်းကို လာလှူကြတယ်။ အပြောလေးကတော့ သင့်ပါတယ်။ ဘာတဲ့ “ သေသွားတဲ့သူ ကုသိုလ်ရအောင်လို့ပါ ဘုရားတဲ့ ” ။ အမှန်က ဘယ်သူမှ မ၀တ်ရဲလို့ ကျောင်းလာလှူတာ။ ”
“ နောက်ပြီး လူသေတင်တဲ့ ကုတင်ကြီးကိုလည်း ကျောင်းလာလှူတယ်။ သေသူကုသိုလ်ရအောင်
လို့ပါ ဘုရားတဲ့။ အမှန်က ဘယ်သူမှ တက်မအိပ်ရဲလို့ ကျောင်းလာလှူတာ။ ”
“ သေသူကုသိုလ်ရအောင် လာလှူတာပါဆိုရင် ပြောလိုက်ချင်တယ်။ သေသူဟာ ဆွဲကြိုးဆွဲရင်းလည်း
သေတာပဲ ၊ လက်ကောက် ၊ လက်စွပ် ၀တ်ရင်းလည်း သေတာပဲ။ သေသူဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့
လက်စွပ်တွေ လက်ကောက်တွေကြတော့ သေသူ ကုသိုလ်ရအောင် ဆိုပြီး ကျောင်းလာမလှူကြဘူး။
“ ဒကာ ၊ ဒကာမတို့ကို မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ၊ မကောင်းတာတွေ ကျောင်းပို့တာ များနေပါပြီ။
ကောင်းတာတွေလည်း ကျောင်းပို့ကြပါဦး ” တဲ့
အင်ထရိုဝင်တာနဲ့ ဆိုင်မဆိုင်တော့ မတွေးတော့ပါဘူး။ ကိုယ်သိစေချင်တာလေး သူများကိုလည်းသိအောင် ရေးပြလိုက်ရလို့ ကျေနပ်ပါတယ်။ :) ဒကာကြီးမိုးမောင်လည်း မကောင်းတာ ကျောင်းမပိုနဲ့နော်...
အမှတ်တရ 2009 သင်္ကြန်
3 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:14 AM
ရိုးရိုးလေးပဲ....တွေးပါ ၊ ကြည့်ပါ။ သင်္ကြန်...ဆိုတာ
credit - ပုံများအားလုံးကို first-11 မှရယူပါသည်
ခရမ်းနုရောင်သစ်သီးထဲက မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဆိပ်
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:01 AM
ပန်းပွင့်အရှင်တွေနဲ့ ကြိုးကို ကျစ်ခဲ့တယ်
( သံယောဇဉ်ဆိုတာ )
ပြတ်သွားရင် ပြန်ဆက်လို့မှ မရတာ
4 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:07 PM
“ ကမ္ဘာမှာ ဒါန အပြုဆုံးက မြန်မာပဲ ၊ ဒါပေမယ့် အမွဲဆုံးကလည်း
အဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သဒ္ဓါအချိုးမကျလို့ကွယ့်။ မလှူသင့်တဲ့နေရာကျတော့
နင်းကန်လှူတယ် ၊ တကယ် လှူသင့်တဲ့နေရာကျတော့ ထိုက်တန်အောင်
( ကချင်ပြည်နယ် ၊ နမ္မားဆရာတော် အရှင် ညဏဆရာတော်ကြီး )
3 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:54 AM
နောက်ဆို သင်္ကြန်မပျော်ရတဲ့ ဘယ်အရပ်ကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မသွားတော့ဘူး
လမ်းထိပ်မှာ ရေတိုင်ကီတွေချပြီး ကလေးတွေ စီနေမလား
ငယ်ငယ်တုန်းကလို လွယ်အိတ်လေးထဲကို ကော်ပုံလေးထည့်လွယ်ပြီး
ကော်ပြွတ်လေးတွေ ၊ စတီးပြွတ်လေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုလိုက်
သူများလမ်းတွေထဲ ဖိုက်တာ လုပ်ပြီး လိုက်ပက်မလား
တခါတလေ ( ဟိုဘက်ဒီဘက်တောင် ရေဗူဖောင်းတွေနဲ့ ဆော်ကြနှက်ကြသေးတယ် )
လမ်းထိပ်မှာ ဘယ်သူတွေ မူးနေကြပြီလဲ ၊ ဘယ်သူတွေ ရန်ဖြစ်နေကြသေးလဲ
ဘယ်သူတွေရော ဖျားနေကြသေးလဲ....ဘာမုန့်တွေ ကျွေးနေကြလဲ
( ဘယ်တော့မှ မဆင်နွှဲရတဲ့ ဘ၀မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး )
“ အတာရေနှင့် အတူတူ ချစ်သော ဘလော့ဂ်ဂါ အစ်ကိုအစ်မ ၊ ညီညီမတွေ အားလုံး
အော်စကာဆုရ ဂျပန်ဇာတ်ကား Departures !!!
4 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:35 PM
“ all married couples are eventually separated byadeath , but it`s tough
being the one left behind ”
first-11 ဂျာနယ် တစ်စောင်ထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းလေးတော့ အနည်းငယ် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရှကားဆိုတော့ ရှာရတာလည်း အနည်းငယ်တော့ ခက်သား။ ရှာကြည့်လိုက်ပေမယ့် ထွက်မလာဘူး။ ထွက်လာတော့လည်း တခြားဆိုက်ဒ်လင့်ခ်တွေဆိုတော့ ဒေါင်းလုပ်ချရတာ အဆင်မပြေတာနဲ့ပဲ မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေတုန်း ဗြုန်းဆို ဒီဆိုက်ဒ်မှာ သူ့အကြောင်း ပြန်ဖတ်လိုက်ရတော့ ကြည့်ချင်စိတ် ပြန်ဖြစ်လာပြီး မရ ၊ ရအောင် ရှာဖွေပြီးကြည့် ပစ်လိုက်တယ်။
အပေါ်က ပေးထားတဲ့ ဆိုက်ဒ်မှာ သူက ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တိုတိုလေး ပြန်ရှင်းပြမယ်။ သဘောလောက်ပေ့ါ။
ဇာတ်ကားကတော့ ဂျပန် - ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ တီးဝိုင်းတခုမှာ ဆယ်လို တီးခက်တဲ့ မင်းသားက အလုပ်ပြုတ်တော့ စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ လင်နဲ့မယား ၂ ယောက်တည်းသာ ရှိသေးပေမယ့် စီးပွားရေး အဆင်မပြေတော့ အလုပ်တခုရှာရင်း “ သေသူတွေကို အလှပြင်ပေးရတဲ့ အလုပ် ” ကို မှားလျှောက်မိရာကနေ ပိုက်ဆံကလည်း ပိုရတာကြောင့် မထွက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံး မိန်းမက သိတော့ အထင်သေးပြီး စွန့်ခွာ ၊ သူငယ်ချင်းကလည်း မပေါင်းနဲ့ မင်းသားဟာ သူ့အလုပ်ရှင် အဘိုးအိုနှင့် အတူ “ လူသေအလောင်းတွေ လိုက်ပြင်တဲ့ အလုပ်ကို ” ပဲ လုပ်နေပါတော့တယ်။ နောက်တော့ မိန်းမက ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့ အခါ သူ့ဆီပြန်လာရင်း လင်မယားနှစ်ယောက် အလုပ်အတွက် ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ မလုပ်ဖို့ ဆွေးနွေးနေတုန်း အသုဘတစ်ခုကြောင့် သူ့မိန်းမဟာ စိတ်ပြောင်းပြီး ၊ သူ့ကို အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒေဂိုနှင့် သူ့အလုပ်ရှင်တို့၏ အသုဘပြင်ဆင်မှုအခန်း
တကယ်ဆို ဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင်ပြီးသွားမှာပါ။ အော်စကာဆုရ ဇာတ်ကားပီသစွာ ဒါရိုက်တာက ဇာတ်လမ်းကို မထင်မှတ်တဲ့ နောက်ထပ် အကွက်တွေ ထပ်ထည့်သွားပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဂျပန်နိင်ငံရဲ့ အသုဘပြင်ဆင်ပုံတွေ ၊ လူတွေရဲ့ စိတ်ထားတွေအကြောင်း ၊ ဖြစ်တက်ပျက်တက်တဲ့ တရားသဘောကို ဒါရိုက်တာက ကောင်းကောင်းကြီး ဖော်ပြနိင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို ဇာတ်ကားကောင်းလေး တခုပါပဲ။ ပြောနေကြ စကားလို့ “ ကျွန်တော့် ညံဖျင်းမှုကြောင့် ကြော်ငြာမကောင်းခဲ့ရင်တောင် ၊ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်စေချင်ပါတယ် ” ခင်ဗျာ။
ကြက်အသေကောင်များကိုပင် မြင်ရုံဖြင့် အော့အန်နေသည့် ဒေဂို
ဒီကျောက်တုန်းလေးကလည်း ဒါရိုက်တာရဲ့ ပရိတ်သက်အပေါ်
ဖခင်အလောင်းကို ကိုယ်တိုင်ပြင်ပေးနေသည့် ဒေဂို
အ၀လွန်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာ ( ကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းကြမယ် )
4 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:06 PM
ကိုယ်က ဆရာဝန်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖတ်စေချင်လို့ပါ။
လူငယ် ၊ လူလတ်ပိုင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသင့်သည်ထက် ပိုနေပါက ၊ လူကြီးဘ၀တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် သေဆုံးနိင်သော အခွင့်အလန်းမှာ ပိုများပါတယ်တဲ့။
( ၁၁ ) ပေါင်ပိုလာလျှင်
အနောက်ပိုင်း အင်္ဂလန်ရှိ ( University Of Bristol ) မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်က ကိုယ်အလေးချိန် ရှိသင့်သည်ထက် ၁၁ ပေါင် ပိုလာပါက ကင်ဆာနှင့် သေဆုံးနိင်သော အခွင့်အလန်း စတင်ဖြစ်ပေါ်နိင်သည်ဟု ပြောပါတယ်။ ၄င်းတို့၏ တွေ့ရှိမှုများသည် လူလတ်ပိုင်းတွင် ရောက်ရှိနေကြသူများ၏ ကိုယ်အလေးညွှန်းကိန်း BMI ( Body Mass Index ) နှင့် ၄င်းတို့ လူကြီးဖြစ်လာသည့်အခါ သေဆုံးရနှုန်းနှင့် ဆက်သွယ်မှု တိုက်ရိုက် အချိုးကျ ရှိနေကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
၄င်းကိုတွက်ချက်ရာ၌ ကီလိုဂရမ်အားဖြင့် ဖော်ပြသော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ၊ မီတာဖြင့်ဖော်ပြထားသော အရပ်အမောင်း ပမာဏ၏ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြင့် စားရပါမည်။
ကဲ....ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ချင်းသူများတွက် အောက်ပါ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်လေးမှာ သွားပြီး ကိုယ့်အရပ်နဲ့ လက်ရှိ ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထည့်ပြီး နှိပ်ကြည့်၇င် ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။
4 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:41 AM
အယ်နီဟာ ဥာဏ်ကောင်းတယ် ၊ ကြိုးစားတယ် ၊ ဟာသဥာဏ်အလွန်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာ သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို သုံးဖြုန်းပစ်ခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး သမားတချို့နဲ့ ပက်သက်ခဲ့ရတယ်။ သူ့ကိုရိုက်နှက်တဲ့ အရက်သမားတွေနဲ့လည်း ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
ဖြစ်ရပ်တွေဟာ ပြန်ဖြစ်တက်တဲ့ သဘော ရှိတယ်။ ကိုယ်က သင်ခန်းစာ မယူတက်ခဲ့ရင် အရင်ကကြုံခဲ့ဖူးတာတွေ ပြန်ကြုံရတက်တယ်။
လူတွေက ကိုယ့်အပေါ် အခွင့်အရေး ယူတက်ကြတယ်ဆိုရင်....
သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ရဲ့ ပြဿာနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ၊ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သယ်ပိုးပေးဖို့ ၊ ရှုပ်ပွနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ အခန်းကို ရှင်းလင်းဖို့ ၊ သူတို့ကို နေ့လည်စာ ၀ယ်ကျွေးဖို့ သင့်အပေါ် အခွင့်အရေး ယူကြမယ်။ ဒါကို သင်ကလည်း လိုက်လျောပြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ ဆက်ပြီး အခွင့်အရေး ယူကြဦးမှာပဲ။
တခြားသူတွေ ကိုယ့်အပေါ် အမြတ်ထုတ်တာကို ဆက်ပြီး ငြိမ်ခံနေမယ်ဆိုရင် သင့်မှာ သတ္တိတွေ ဒါမှမဟုတ် အစွမ်းအစ မရှိသေးခင်အထိ ပိုက်ဆံတွေ ဆက်ကုန်နေဦးမှာပဲ။
ရည်းစားမရှိတာထက်စာရင် တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွဲနေတာက တော်သေးတယ်လို့ သဘောထားပြီး ရိုင်းစိုင်းသူ ၊ ပျင်းရိသူ ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်သူ တွေကို အနွံတာခံပြီး ဆက်တွဲနေမယ်ဆိုရင် ငရဲကလာတဲ့ အဖော်တွေကို အဆုံးမရှိ ကြုံနေရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရပ်တည်ချက် တခုခုမရှိရင် သမိုင်းဆိုတာ တပတ်ပြန်လည်လာတက်ပါတယ်.....
“ ငါသာ တခြားနေရာမှာ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ ဥပမာ - ဟိုင်ဝါရီလို နေရာမျိုး ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားသူငယ်ချင်းတွေသာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ပြဿာနာမျိုး ကြုံရမှာ မဟုတ်ဘူး ” လို့ တွေးချင် တွေးမိမယ် ၊ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ စိတ်ထားကို မပြင်သရွေ့ ပြဿာနာတွေ ကြုံနေရဦးမှာပါပဲ။
အကျွန်ပ်တို့မှာ အားနည်ချက်တွေ ရှိတဲ့အခါ ဒါဟာ သံလိုက်လိုပါပဲ၊ ဘယ်နေရာကိုပဲ သွားသွား အရင်ရခဲ့ဖူးတဲ့ သင်ခန်းစာမျိုးတွေကိုသာ ထပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒါဟာ ဘ၀ရဲ့ ဥပဒေသ ပါ။
စိတ်ဆင်းရဲ သူတွေ ပြောကြတာက “ ဘာကြောင့် င့ါကိုမှ ဒါမျိုးတွေ ရွေးဖြစ်နေရတာလဲ ”
ဘ၀မှာ အကျိုးရှိရှိ နေတက်သူတွေကတော့ “ ဒီသင်ခန်းစာကို ယူရမယ် ၊ ဒါမှ မဟုတ်ရင် နောက်တခါ ထပ်ဖြစ်လာဦးမယ် ”
“ သင့်ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာမှန်သမျှ သင့်အတွက် ခွန်အားပို၍ တိုးစေတယ်လို့ မှတ်ယူပါ။ ဒီလိုစိတ်ထားတက်ရင် ဒုက္ခခံစားရသူလို ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ”
Leona Louise Lewis ရဲ့ Better In Time
0 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:42 AM
Leona Louise Lewis - (born3April 1985) isaBritish pop/R&B singer. She was the first female winner of the UK reality TV series The X Factor. She wona£1 million recording contract to Simon Cowell's record label, Syco Music and went on to signa£5 million ($9.7 million) five album contract in the United States with Clive Davis's record label, J Records.
ဒါကတော့ Wiki က ရှာထားတဲ့ သူမရဲ့ ဘ၀အစိတ်အပိုင်း တစ်ချို့ပါ။ အသားညိုညိုနဲ့ တခါတခါ ထထအော်ဆိုတက်တဲ့ သူက ၊ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တွေရဲ့ ရှိနေကြ အတိုင်း ထူးခြားပိုင်ဆိုင်တဲ့ သီဆိုဟန် နဲ့ အသံတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူပေ့ါ။ သူ့သီချင်းတွေထဲက ကျွန်တော် ကြိုက်မိတဲ့ သီချင်းလေး တပုဒ်ကို ဝေမျှချင်လို့ပါ။ ဒီ Better in time သီချင်းဆိုဟန်က မြူးတယ်လို့တော့ ဆိုနိင်ပေမယ့် စာသားတွေကတော့ အလွမ်းအဆွေးလေးတွေ သက်သက်ပါ။ နားထောင်လို့ ကောင်းတယ်လို့တော့ အာမခံပါတယ်။ တော်ကြာ ကိုယ်ကြော်ငြာမတက်တာနဲ့ သီချင်းကောင်းလေး လွတ်သွားမှာဆိုးလို့။ VCD တင်ပေးချင်ပေမယ့် ဖိုင်ဆိုက်ဒ် အရမ်းကြီးတာကြောင့် Mp-3 လေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်စေချင်ပါတယ်။
ကဲ စာသား အင်ထရိုလေးကတော့.....
9 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:05 AM
North Atlantic Ocean...ရဲ့ ဟိုဘက်မှာနေတယ်
ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကို ဘယ်လိုဖြက်ကူးရင် ကောင်းမလဲ
စဉ်းစားတော့......အဲဒီ အရူးမလေးကဆိုတယ် “ ရေကူး ” တဲ့
အကြော်သည် ဒေါ်ပူစူး ကတော့
သူ့ဆီက အကြော်ကြော်တဲ့ ဒယ်အိုးနဲ့ ကူးစေချင်တယ်
လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့တောင်....ကျွတ်ဖာတဲ့ လူကြီးကလည်း ဆိုသေးတယ်
ဘောကွင်းကြီးပဲ လည်ပင်းမှာ စွပ်ထားရမလား
သမုဒ္ဒရာကြီး တခုလုံး ဖြက်မယ်သာ ပြောတာ
လက်ငါးချောင်း ပြည့်အောင် ကူးဖူးတာ မဟုတ်တော့
ကဲ.. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ
6 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:20 AM
စီးပွားရေး အဘိုးအိုကြီးတစ်ယောက်သည် ရောဂါသည်းထန်သဖြင့် သတိရတချက် ၊ မရတချက် ဖြစ်နေ၏။ မိသားစုတွေကလည်း စိုးရိမ်ကြီးစွာ စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ သတိတစ်ချက် လည်လာသည့် အခိုက်တွင် အဘိုးကြီးက မျက်စိဖွင့်မကြည့်ဘဲ မေးသည်။
“ အမေကြီး ရှိသလား ”
ဇနီးဖြစ်သူက လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး....
“ ရှိပါတယ် ၊ ကျမ တချိန်လုံး အနားမှာ ရှိနေပါတယ် ”
“ သားကြီး ရှိလား ”
“ ရှိပါတယ် အဖေ ”
“ သားလတ်ရော ”
“ ကျွန်တော် ရှိပါတယ် ”
“ သမီးကြီး ”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဖေ ”
“ သမီးငယ် ”
“ ရှိပါတယ် ဖေဖေ ”
“ သားထွေး ”
“ ဟုတ်ကဲ့ အဖေ ၊ ကျွန်တော် ရှိပါတယ် ”
အမေကြီးက ၀င်ပြောပြန်သည်။ “ အဖေကြီး ဘာပြောချင်လို့လဲ ၊ မိသားစု အားလုံး ၊ အနားမှာ စုံစုံလင်လင် ရှိကြပါတယ် ”
ထိုအခါ အဘိုးကြီးက ဒေါသတကြီး လေသံမာမာဖြင့် “ ရှိသမျှ လူအားလုံး ငါ့နားမှာပဲ လာနေကြတော့ ဆိုင်ကို ပိတ်ထားရမှာပေ့ါကွ ၊ တစ်ယောက်မှ အသုံးမကျဘူး ” ဟုပြောပြီး ဇက်ကျိုးကျသွားလေတော့သည်။
မင်းလူ ( အသပြာလုလင် ) မှ
Wicker Park ( Drama ကောင်းကောင်း ကြိုက်သူများအတွက်...
အ၀လွန်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာ ( ကိုယ်အလေးချိန် တိုင်းကြမယ...